Lambamena - Wikipedia
Ny lambamena dia ilazana lamba hamonosana ny maty teo amin'ny Ntaolo. Anarana fotsiny ihany ny lambamena fa mety ho volonkazo ny lokony, mety ho fotsy na mavo na mena mihitsy, angamba noho izy mivadika mena rehefa ela namonosana razana no nahatonga ny anarany hoe lambamena (marihana moa fa ny mena tamin'ny Malagasy taloha dia somary miloko volontany mifangaro loko mena). Ny lambalandy kosa dia ampiasaina hilazana ireo lamba vita amin'ny landy saingy hitafian'ny velona.
Samy manana ny soratra sy lokony ireny lambamena ireny ary ny sasany aza dia misy ny anaran'ilay razana vita amin'ny vakana. Miankina amin'ny lokony sy ny halehibeny (misy telo vitrana, 5 vitrana, sns...) anefa no vidiny. Araka ny fiteny hoe "Izay sahy maty no mifono lambamena" dia ny lamba miloko mena no tena lafo vidy ka ireo olona manankaja sy mahery fo teo amin'ny fiarahamonina no tena nividiananan'ny olona azy sy notolorana azy satria mendrika izany noho ny vidiny. Ireo lamba tsy dia misy loko firy kosa (volonkazo) dia mora kokoa ny vidiny.
1 Ny akora anaovana ny lambamena
2 Tantaran'ny fanenomana lambamena
3 Ireo fady manodidina ny landy
4 Ny ampiasaina ny lambamena avy amin'ny landy
5 Tantaran'ny fitafiana lambamena sy ny lamba landy
6 Ny lamba vita amin'ny landy sy ny raharaham-pirenena merina
7 Ohabolana mikasika ny lambamena
Ny akora anaovana ny lambamenaHanova
Maro ny akora azo anaovana ny lambamena toy ny rongony lavaravina, ny landy tapia sy ny landivato izay ahazoana ny landibe, ny landi-hala ahazoana ny landikely, ny landimborihazo ary ny lasoà. Efa misy kosa ankehitrio ny manao lambamena amin'ny kofehy tubino. Amin'ireo akora ireo anefa dia ny landy no ambonin-damba teo amin'ny Ntaolo ka tononiny hoe "andriamanitra".
Ny samoina no manatody ary raha foy dia lasa fanday in-telo miova (antitra isam-bolana) ka mihodidina ny tenany ary lasa soherina ahazoana ny cocons izay lasa samoina indray satria tsy afa-manidina. Ny cocons ary no andrahoina ka ahazoana kofehin-dandy izay hasinina ho lasa kofehy ary izany no tenonina.
Tantaran'ny fanenomana lambamenaHanova
Taty Imerina dia saika nahay nanenona landy ny olona indrindra ireo vohitra nisy andriana saingy Ambohidrabiby, iray amin'ireo tendrombohitra 12 masina, no renivohitry ny lamba landy sy lambamena taty Imerina. Ny nahatonga izany dia izao: Rabiby, mpanjaka arabo teo Ambohidrabiby sy ny taranany teo no tena nampiroborobo ny fanenomana ny landy avy amin'ny bibin-dandy sy ny rongony taty Imerina fa tao alohan'izany dia landy azo avy amin'ny ala sy landy sovazy no notenomin'ny olona. Ireo tarana-dRabiby atao hoe Andriandoriamanjaka, no nitafy jaky voalohany taty Imerina, jaky izay notenoniny ihany. Ny jaky dia lamba vita amin'ny landy na rongony ka miloko mena mitsoriaka volombolamena. Raha nahita ireo jaky i Ralambo dia nanontany izany hoe: "Fa inona no antony anaovanareo izao akanjo jaky izao?". Dia hoy ny famalin'ireo Andriandoriamanjaka tarana-dRabiby ireo: "Izao no ataonay mba tsy hisomongoan'olona izahay fa izahay andria-manjaka". Dia hoy Ralambo: "Tsara izao ataonareo izao fa avelao koa izahay mba hitafy izao". Ary tamin'i Ralambo nandova an-dRabiby sy Andriamanelo dia hoy i Ralambo tamin'ireo Andriandoriamanjaka: " Tsy misy mitafy jaky amin'izao tany izao afatsy ianareo sy ny taranakareo ary ny andriamanjaka, ary ianareo sy ny zanakamamparanareo no mpanenona ny lamban'andriamanjaka mifandimby ka tsy andriana manjaka raha tsy mitafy ny lamba tenominareo". Nanomboka tamin'i Ralambo ka hatramin'i Ranavalona III dia ny Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby sy Fonohasina (eo amin'ny tehezana avaratra antsinanan'ny vohitr'Ambohidrabiby) no mpanenona ny lamban'andriamanjaka taty Imerina sy angalana ny soherina ilaofan'ny andriamanjaka sy ny ankohonany. Ary mandrak'ankehitriny, dia mbola maro ireo tarana-dRalambo sy Andrianjaka no maka lambamena sy lamba landy eny Fonohasina.
Tamin'Andrianampoinimerina kosa dia any Mahitsy no nompiana ny landy satria tsy mety raha sady mamelona no mamono azy, Miadanimerina no mamoly landy; ny Andrianamboninolona, Andriandranando sy Zanadralambo dia isan'ny mpamoly, mpanasina ary mpandrongo firaka ny landin'andriamanjaka raha ny Andriandoriamanjaka ihany no nanao izany teo aloha. Mbola ny Andriandoriamanjaka hatrany anefa no hany mpanenona ny lamban'Andriamanjaka hatramin-dRalambo ka hatramin-dRanavalona III.
Ireo fady manodidina ny landyHanova
Be fady ny manodidina ny fiompiana, fanenomana ary ny fivarotana lambalandy. Ohatra amin'izany, ny bibin-dandy tokoa mantsy tsy tia toerana maloto na misy fofona, tsy itenenan-dratsy, tsy anozonana, tsy anaovana sain-dratsy, fa mamono azy izany. Tsy tia kotaba, tsy tia loto, mananjina, tsy azo hoaina, mila misasa raha avy namonjy fahoriana ny mpiompy raha tsy izany maty ny zana-dandy. Koa teo Fonohasina no notenomina ny lamban'andriamanjaka satria io toerana io hono dia tanàna masina noho ny hasim-panjakana nafenin'ny mpanjaka Rabiby tao raha nanao joro izy. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19 anefa dia tafaray Imerina sy Imamo ka noho ilay fadifady hoe izay mamelona tsy mamono dia Imamo no mamelona ny zana-dandy fa ny Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby sy Fonohasina kosa no nahadro sy nanasina ary nanenona ireo landy hanaovana ny lamban'andriamanjaka.
Ny ampiasaina ny lambamena avy amin'ny landyHanova
Ny lambamena hono no arakotra ny maty dia satria ny fanahy tsy mba maty fa velona. Jakimena kosa no arakotra ny lakambola mifono ny taolambalon'ny andriamanjaka. Ny lamba avy amin'ny landy koa dia atao hasina hoan'ny mpanjaka fahizay raha mamangy azy.
Tantaran'ny fitafiana lambamena sy ny lamba landyHanova
Samy manana ny tantaran'ny lambamena sy lamba landy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny sakalava ohatra dia voalaza fa tsy mba nanenona landy fa rafia. Toy izao ary ny tantaran'ny lambamena sy lambalandy hoan'Imerina-Ambaniandro manokana.
Taty Imerina dia lafo dia lafo tokoa ny lambamena sy lambalandy ka tsy mitafy sy mifono izany afatsy ireo mpanefoefo sy ny andriana. Fahizay ary, ny ankabeazan'ny olona dia tsy nitafy lambalandy ary tsy mifono lambamena noho ny halafon'ireo lamba ireo. Ravin-kazo voarary na hodi-biby no nitafian'ny ankamaroan'ny vahoaka. Ireo mpanefoefo kosa dia mifono lambamena efa ho 30 isa ka ny fasan'izy ireo dia hadina lalina tokoa ny varavaram-pasana ary fenoina vato amin'ny sarety mihitsy hiarovana amin'ireo mpangalatra lambamena. Ireo fianakavian'andriana merina maro kosa dia saika nitafy landy ary nifono landy mba hanehoany ny harenany.
Ankehitriny dia tonga fanehoana ny maha Malagasy ny fiakanjoana ny lambalandy saingy indrisy, saika lamba vita avy amin'ny kofehy tubino sy lasoà synthétique no amidy eny antsena. Ho an'ny taranak'andriana merina kosa anefa dia mbola misy ny manao izany rehefa mianjaika na mandevina ka misy soratsoratra maro toy ny satrok'andriana na voaloboka na aviavy ireny lamba itafiany ireny.
Ny lamba vita amin'ny landy sy ny raharaham-pirenena merinaHanova
Amin'ny fandroan'andriana kosa dia landy fotsy no itafian'ny olona manana ny maha-izy azy fa tamin-dRasoherina vao nitafy ny lamba arindrano ny olona. Lambalandy mena kosa no anakonana ny andriamanjaka raha mandro izy amin'ny fandroana.
Tamin'ny andron-dRabiby nanjaka teo Ambohidrabiby (taonjato faha-16), dia tonga teo Ambohidrabiby ireo Antavaratra, Sakalava, Sihanaka, Bezanozano hividy lambamena. Nihamafy hatrany izany fahatongavan'ny foko avy any amorontsiraka izany hatramin'ny taonjato faha-19, ka ireo lambamena ireo dia amidin'izy ireo amin'ireo tatsambo arabo sy vazaha. Nisy mihitsy aza ireo mpivarotra arabo no niakatra taty Imerina tamin'ny taonjato faha-18 nitondra basy sy andevo hatakalo lambamena.
Tonga raharaham-pirenena mihitsy taty Imerina ny resaka lambamena ka hoy ny teny anavona nataon'Andriamasinavalona mantsy an'Imamo mba hanehoany ny fahaleovantenan'ny fanjakany: "Tapia tsy miakatra an'Imerina ary Amberivatry tsy midina Imamo". Ny tapia sy ny amberivatry mantsy dia samy manome ravin-kazo sakafon'ny zana-dandy izay manome ny kofehy landy. Izany teny izany no nataon'Andriamasinavalona dia hanehoany fa na malaza aza Imamo dia manana ny hasiny koa Imerina. Tamin'Andrianampoinimeirina niady tamin'Andrianjafy dia naka ny fanampian'ny mponin'Ambohidrabiby sy ny manodidina izy. Tonga teo Ambohidrabiby amin'ireo Andriandoriamanjaka mpanenona lamban'andriana ary ny irak'Andrianampoinimerina koa tsy valin-teny no nomen'ireo Andriandoriamanjaka fa jaky fitafin'andriana notenomin'izy ireo no nampitondrainy ny irak'Andrianampoinimerina. Raha vao hitan'Andrianampoinimerina ny jaky noentin'ireo irany dia hoy izy sady nibitaka: "Efa azoko izao merina rehetra izao fa efa ahy ny jakin'Andriandoriamanjaka". Ary notafiany izany ka tanteraka taminy ny tenin-dRabiby sy Ralambo. Ary izany hono no nahatonga an'Ambohidrabiby ho "hasin'Imerina".
Tsy tokony hohadinoina anefa fa ny fanenomana ny lambamena sy lamba landy dia maneho fa iray ihany ny razan'andriana taty Imerina sy tany Imamo. Ara-tantara, tamin-dRabiby dia efa nisy ny fifanambadiana tamin'andrian'Ambohidrabiby sy ireo Andriambahoaka. Ary ireo Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby aza hono no nitondra ny fanenomana ny landy tany Imamo raha niainga teo Ambohidrabiby izy ireo ka nifanambady tamin'ny andriana tany Imamo.
Tsy mena-mitaha amin'ireo lambamena sy lamba landy avy any Imamo sy avy amin'ny faritr'i Betsileo mantsy ny lambamena sy lamba landy novokarina teto Imerina. Voalazan'ny lovantsofina tokoa fa ireo lambamena sy lamba landy avy aty anivon'Imerina no tena notadiavin'ireo mpivarotra arabo sy eropeana tany amorontsiraka nanomboka tamin'ny andron-dRalambo izany, koa maro tamin'ireo mpivarotra ireo no tonga taty anivon'Imerina mihintsy nanakalo izany lambamena sy lambalandy izany amin'ny basy, andevo, sns...ary maro tamin'ny lambalandy avy aty Imerina no novidian'ny arabo tamin'ny seranan'i Boeny efa tamin'ny taonjato faha-17.
Andrianampoinimerina koa hono raha nifampitsapa saina tamin'ny mpanjaka betsileo malaza iray dia nomen'ito mpanjaka betsileo ity lambalandy lafo vidy notenomina tany Ibetsileo. Manoloana izany dia naniraka tandapa naka lambajaky tamin'ny Andriandoriamanjaka i Andrianampoinimerina ka notsobarany teo afovoanin'io lambajaky io izay vao nampanateriny tamin'ny mpanjaka betsileo. Vao nahita io lambajaky io hono ilay mpanjaka betsileo dia nanoa an'Andrianampoinimerina satria hitany fa lalin-tsaina ito mpanjakan'Imerina ito.
Ankehitrio kosa, amin'izao andron'ny Repoblika izao, dia mbola fomban-tany maro eto Madagasikara ny manolotra lambalandy misoratr'andriana hoan'ireo filohan'ny Repoblika, izany dia mampiseho fa ny lambalandy dia voasokajy ho isan'ny tolotra fanamarihana fa ny olona ambony sy lehibe indrindra eo amin'ny fiarahamonina no afaka mitondra azy. Izany hoe tsy olonolompoana no mitafy lamba landy indrindra raha eny imasom-bahoaka.
Ohabolana mikasika ny lambamenaHanova
Maro koa ireo fomba fitenenana mahakasika ny lambamena sy ny lambalandy ka hoy ny ntaolo:
"Andevo mitafy jaky, ka arahabaina tsy andriana, tsy arahabaina toa andriana": izany hoe ny endriny dia tsy andriana nefa ny fitafiny dia andriana, entina hilazana zavatra manalasala ny momba azy;
"Ny fihavanana toy ny landy, velona itafiana, maty ifonosana ka izay madilana arahi-panondro", entina hilazana zavatra tsy misaraka amin'ny tena na ankaratsiana na ankafaliana na aiza na oviana ka tsy maintsy atao izay hahatsara azy;
"Ny be lamba", entina hilazana ireo Andriandoriamanjaka, teo Ambohidrabiby sy Fonohasina, mpanenona ofisialy ny lamban'ny mpanjaka merina nifandimby, noho izy ireo mitafy lamba landy izay ataony mirebareba amin'ny tany mba hampisehoany fa manankarena sy manana ny maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina izy ireo;
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lambamena&oldid=909065"
Dernière modification le 23 Oktobra 2018, à 09:33
Voaova farany tamin'ny 23 Oktobra 2018 amin'ny 09:33 ity pejy ity.